Lozam-pifamoivoizana :: Mpandeha môtô maty nifandona tamin’ ny kamiao • AoRaha
Lozam-pifamoivoizana Mpandeha môtô maty nifandona tamin’ ny kamiao
Nindaosin’ny fahafatesana, fotoana vitsy nahatongavany teny amin’ny hôpitaly, ny lehilahy iray nitondra môtô niharan’ny lozam-pifa­moi­voi­zana, teny Ambohi­trombihavana Ambohimangakely, afak’omaly antoandro.
Nifandona tamin’ny kamiao ny kodiaran-droa nentiny. Naratra ny namany nanao taingin-droa niaraka taminy.
Nandeha tamin’ny fio­lahana ny kamiao nitondra simenitra 32 taonina avy any atsinanana. Avy any Ambo­himangakely kosa ny môtô nitondra lehilahy roa, samy manodidina ny 24 taona, ka nifatratra teo amin’ny valahan’ilay fiarabe.
Potika tanteraka ny môtô. Nitrosona teo amin’ny tany izy roa lahy. Fiaran’olon-tsotra sendra nandalo no nitondrana azy ireo haingana tany amin’ny hopitaly. Notazonin’ ny zandary halaina am-bavany kosa ny mpamily ni­tondra ny kamiao.
Fanakanan-dalana Voaroba ny 5 tapitrisa ariary an’ilay mpamily kamiao
Voina teny am-pambolen-kazo :: Namangy ny havan’ilay lehilahy maty tampoka ny Zandarimaria
Fahafatesana teny 67ha avaratra :: Nogadraina ilay reny voarohirohy ho namono ny zanany roa